Qarsoodi - Dhaqdhaqaaqa
Siyaasadda Arimaha Khaaska ah
Nidaamkan Qarsoodiga ah wuxuu sharaxayaa sida macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed loo ururiyey, loo isticmaalay, loona wadaagay markii aad booqatay ama aad ka iibsaneyso www.buddhatrends.com ("Site").
Intaa waxaa dheer, marka aad iibsaneyso ama isku dayeyso inaad iibsato bogga, waxaan ku soo aruurineynaa qaar ka mid ah macluumaadkaaga, oo ay ku jiraan magacaaga, cinwaanka biilka, cinwaanka maraakiibta, macluumaadka lacag bixinta sida lambarrada kaararka deynta, cinwaanka email, iyo lambarka taleefanka. Waxaan u gudbineynaa macluumaadkaan "Warbixinta Dalabka".
- Keeno amarradeena khatarta ama khiyaanada;
Ugu dambeyn, waxaan sidoo kale la wadaagi karnaa Macluumaadkaaga Shakhsiga si ay u hoggaansamaan shuruucda iyo xeerarka khuseeya, si ay uga jawaabaan amar maxkamadeed, oggalaansho baaritaan ama codsi kale oo sharci ah oo ku saabsan macluumaadka aan helno, ama si kale loo ilaaliyo xuquuqdeena.
Bogga looguma talo-galeynin shakhsiyaadka da'doodu ka yar tahay 18 sano
Macluumaad intaas ka badan oo ku saabsan habdhaqanka asturnaanta, haddii aad hayso su'aalo, ama haddii aad rabto inaad sameyso cabasho, fadlan nagula soo xiriir annaga oo nagala soo xiriir emailka support@buddhatrends.com ama boostada adigoo isticmaalaya faahfaahinta hoos ku qoran:
[Re: Sarkaalka Compliance Privacy]